VAKY BANTSILANA : Vain-drahalahy tsy marary… | NewsMada
VAKY BANTSILANA : Vain-drahalahy tsy marary…
Ny sasany mijery horonan-tsarimihetsika any Copenhague, ny sasany mivory any Etazonia, ny Malagasy eto dibo-drano. Ireo olona lasa any ivelany ireo anefa no tena tokony ho eo anilan’izy ireo amin’izao voina mahazo azy izao. Saingy toa tsy raharahin’izy ireo izany fa misy ny laharam-pahamehana ho azy ireo noho ny fiakaran’ny rano sy ny fahamaroan’ny traboina. Eny e, rehefa tsy hanao izy ireo dia tsy maintsy misy hafa hanao izany eo amin’ny toerany. Tokony hiraikitra ao an-tsain’ny Malagasy izao trangan-javatra izao satria afaka hitsarana azy ireo amin’ny fanadinana (fifidianana) manaraka izay azo antoka fa handraisan’izy ireo anjara.
Fa mitondra inona ho an’ny traboina anefa ny sarimihetsika e ? mitondra inona ho an’ny Malagasy ny fivoriana any Etazonia ? firifiry izay ny fivoriana natrehana tany ampitan-dranomasina saingy inona no vokany ho an’i Madagasikara ? rehefa tsy nahitam-bokany aloha dia tokony izay vain-dohan-draharaha no atao mahamaika. Raha ny saran’ny fiaramanidina nahatongavana tany Etazonia na tany Copenhague ve tsy nahazahoana vary tamin’ny gony marobe afaka nozaraina ho an’ireo traboina ? (mety nahazo hatramin’ny tsy traboina aza). Mandefa taratasy fialan-tsiny any amin’ireo olona nandefa fanasana avy eo hoe : « noho ny fitiavako ny mpiray tanindrazana amiko dia tsy afaka hanatrika ilay fivoriana, na ilay fijerena sarimihetsika aho fa nividianako vary ho an’ny traboina ny vola tokony hividianako tapakila sy ny fandaniana rehetra hanatrika ny fanasanareo ».
Samy manana ny laharam-pahamehana aminy marina. Ny azo antoka anefa dia volam-bahoaka no entin’izy ireo nanatanteraka ireo diany ho any ivelany ireo. Ny an’ny iray vola tao amin’ny minisiteran’ny mponina ary ny an’ny iray kosa tao amin’ny kitapom-bolan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Tsy azo lavina izany, iza amin’ireo mpitondra eto izay mbola eo amin’ny fahefana no andeha hanatrika fanasana iraisam-pirenena no efa nilaza fa volany madiodio no nentiny namonjy izany tany ivelany ?
Fotoana izao ho an’ny vahoaka Malagasy handinihina tsara ny ho avy. Fotoana fijerena ny asa ataon’ireo mpitondra sasany izay mbola manantena mafy ny hiverina eo amin’io fitondrana io aorian’ny fifidianana. Ny tsy fantatr’ireo mpitondra, fantany ihany fa tsy raharahiany loatra, dia tsy maintsy ho avy ny fotoana ahatongavan’ny « fitsaram-bahoaka » (amin’ny heviny madio amin’ny alalan’ny latsa-bato). Raha izao zava-misy izao, inoana fa haneho ny heviny amin’ny fomba malalaka ny Malgasy hoe : « nandondona aho tsy novohainao, noana aho tsy nomenao hanina… ».